Orinasa bateria sela, mpamatsy - mpanamboatra sela bateria China
PLM 3.2v 280Ah Prismatic LiFePO4 LFP Lithium Battery Cell ho an'ny EV, fitehirizan-angovo amin'ny rafitra Solar
Manomeza 3.2V 280Ah Prismatic LiFePO4 LFP Lithium Battery Cell avo lenta ho an'ny EV, fitehirizan-angovo amin'ny masoandro izahay. dia mpanamboatra matihanina manolotra fikarohana, fampandrosoana, famokarana ary serivisy fivarotana sela bateria ionon'ny lithium ary fonosana bateria. Mamolavola sy manamboatra bateria sy sela vita ho an'ny mahazatra izahay. Kitapo bateria lithium lifepo4 namboarina avy amin'ny 3.2V-96V, 5AH-280AH, izay azo ampiasaina amin'ny RV, EV, Solar system, E-bisikileta, UPS, rafitra fitehirizana angovo, tobin-tserasera, E-scooter, E-fitaovana, golf sarety, fanondranana fork, fiara fanadiovana, seza misy kodiarana elektrika, ary fampiharana hafa amin'ny tsingerina lalina.
Lithium Ion Lifepo4 100ah Battery 3.2v Lifepo4 Battery Cells bateria fitehirizana angovo avy any an-trano Herin'ny herin'ny herin'ny masoandro.
Manome kalitao avo lithium Ion Lifepo4 100ah Battery 3.2v Lifepo4 Battery Cells Solon'ny angovo azo avy amin'ny herinaratra ao an-trano amin'ny herinaratra. Araka ny selan'ny bateria LFP hafa dia afaka manomana kiraro sy mpanasa sy takelaka mifanohitra. Rehefa zotram-pamokarana bateria mivantana izahay, dia manolotra ny fanaingoana OEM / ODM, ankoatry ny fahaiza-manao, ny habeny, dia afaka manomana ny ampahany rehetra ilainao amin'ny tetikasanao. mba hifandraisanao aminay rehefa mila bateria ianao.
Mpanamboatra bateria lithium azo havaozina ao amin'ny orinasa mpamokatra jiro miisa 26650 3.7v 5000mah fonosana bateria 5000mah natsangana tao anatin'ny BMS
Izahay dia manome mpanamboatra bateria lithium bateria azo havaozina avo lenta jiro 26650 3.7v 5000mah fonosana bateria miorina ao anatin'ny BMS.Shenzhen Polymer Battery Co. Ltd dia orinasa mpamokatra bateria lithium azo averina ho an'ny karazana bateria toy ny 26650, 21700 amin'izao18650, 14500, 123A, 103450 , AA, AAA sy ny sisa. Ny vokatra vokarintsika dia misy ny Lithium Battery, ny fiara mifehy fiara, fiara fitaterana lozisialy amin'ny fitehirizana ny angovo sy ny bateria, mety ho an'ny jiro finday.traffic, fiara, fanaraha-maso ny filaminana. ara-bola, hery famerenam-bola ary sehatra hafa.
Manome varotra bateria avo lenta avo lenta mivantana izahay 3.7v li-ion 18650 sela bateria azo havaozina bateria lithium avo lenta. Shenzhen Polymer Battery Co. Ltd dia orinasa fanamboarana bateria lithium azo ampiasaina ho an'ny karazan-jiro rehetra toa ny 18650, 18650, 14500, 123A, 103450, AA, AAA sy ny sisa. Mihaona amin'ny CE, ROHS, SGS, UN38.3 ary ny MSDS Standard ny PLM Quality. Ny tranobainay dia manana velaran-tany 10.000 metatra toradroa, azontsika atao ny mamadika bateria 2 000 000 pcs ary bateria bateria 1 000 000 isam-bolana. Manafay mafy izahay araka ny ISO 9001: 2008 hanome ny vokatra avo lenta miaraka amin'ny ekipa R&D matihanina, mpiasa efa za-draharaha sy fitaovana mandroso.O marika PLM dia marihina fa mitovy amin'ny kalitao ny ankamaroan'ny mpanjifa an-trano sy any ivelany.
CB UL Fankatoavana 18500 1500mAh 3.7V sela bateria ionona lithium ho an'ny hazavana
Manome kalitao avo lenta CB UL 18500 1500mAh 3.7V lithium ion cellule Shenzhen Polymer Battery Co. Ltd izahay dia mpanamboatra bateria lithium, batterie flash-light, baterin'ny jiro mpitrandraka, batterie audio, batterie jiro, bateria kilalao ary vokatra hafa toy ny modely 18650, 18500, 14500, 123A, 103450, AA, AAA ary ny sisa eto aminay Ny orinasa iray dia orinasa avo lenta mifangaro amin'ny R&D, famokarana ary varotra. Ny orinasanay dia manana hery ara-teknika matanjaka ary miezaka ny manatsara ny asa tanana. Ny fahombiazan'ny mpanjifanay dia ny fahombiazantsika. Manana fifehezana hentitra amin'ny fitaovana vita amin'ny famokarana, vokatra olan'ny famokarana sy vokatra izahay. Manana tombony maro isika toy ny fivoahana avo lenta sy fitoniana. Manana laza avo dia avo amin'ny indostria izahay. "Ny fiaraha-miasa sy ny fandrosoana iraisana dia ny fanahin'ny orinasa tsy miovaova. Ny fahafaham-po azo antoka dia tanjona kendrena ho an'ny mpamatsy sy mpizara isika! Mifikitra amin'ny filozofianan'ny orinasa momba ny tsy fivadihana, ny fahombiazana ary ny fanavaozana isika ary mampiditra ny filàna ilaina amin'ny serivisy. orinasa elite amin'ny famokarana angovo finday, "famokarana. Varotra ny tsena. Hanohy hanamafy ny firafitry ny indostrian'ny mpanjifa fikarohana manokana izahay hanatitra bateria avy any Shina amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny ranomasina sy ny rivotra amin'ny vidiny mirary. Ary manome ny fanohanana ara-teknika ilaina sy ny garantiana ilaina aminao izahay!
Ny fihodinana lalina anaty kibo LiFePO4 800mAh 3.2V /3.7V azo averina kitapo IFR 14500 Battery
3.2v Voltage nominal 10ah nominal Capacity nominal 40152S 15ah 3.2v lifepo4 sela bateria fiara
Izahay dia manome 3.2V Nomote Volapoky Nominaly 15ah avo làlan-dàlana 40152S 10ah 3.2v lifepo4 sela bateria ampiasaina amin'ny hazavana LED, jiro an-dalambe, fonosana bateria, fitehirizana masoandro, fiara elektrika, borosy nify elektrika, bateria totozy, jiro ary fampiharana hafa mety .40152S Ny haben'ny bateria dia manana kalitao tena izy, mampanantena ny tsy hampiasa fitaovana ambany kalitao. Manome bateria 40152S avo lenta ho an'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao izahay ary manampy ny mpanjifa handefa bateria avy any Shina amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny ranomasina sy ny rivotra amin'ny vidiny mirary. Ary manome ny fanohanana ara-teknika ilaina sy ny garantiana ilaina aminao izahay!
3.2v Voltage nominal 10ah nominal Capacity nominal 38120 10ah 3.2v lifepo4 sela bateria fiara
Manome kalitao bateria IFR 32650 bateria IFR 32650 avo lenta izahay izay manome hazavana LED, jiro an-dalambe, fonosana bateria, fitehirizana masoandro, fiara elektrika, borosy nify elektrika, batterie totozy, jiro ary fampiharana hafa mety.32650 sela dimensionbattery avo lenta miaraka amin'ny fahaiza-manao tena izy, mampanantena ny tsy hampiasa fitaovana ambany kalitao. Ny orinasa PLM dia nifantoka tamin'ny indostrian'ny bateria sy lithium nandritra ny 6 taona. Ny bateria sy ny lozisialy Lithium Lithium dia nandalo fitsapana iraisam-pirenena maro, toy ny UL, CE, RoHs, UN38.3, MSDS , Ny orinasa FCC, snsPLM dia niara-niasa tamin'ny mpaninjara lehibe maro tany amin'ny firenena maro, toa ny USA, CA, UK, France, Italia ary ny sisa.OEM. Misy ny serivisy ODM. Tongasoa eto amin'ny fiantsoana anay! Ny trano fanatobiana HK hanafatra bateria avy any Japon sy Korea. Ny vidiny tsara indrindra sy ny antoka misy batterie 100% voalohany.
Antsipiriany momba ny vokatra: fivarotana bateria mivantana fivarotana rechargeable AAA 1000mah Ni-mh 1.2v bateria Fampidirana ny fampidirana bateria PLM-1.2V: Mini Car, kilalao elektrika, fonosana bateria, fitehirizana masoandro, Fiara elektrika, borosy nify elektrika, batterie Mouse, labozia, Fanaraha-maso lavitra, sns .. Ny antoka omena 1 Production Professional Production 2） Professional testing 3 Wholesale Factory Wholesale 4） OEM / ODM Tonga soa vaovao, vokatra azo, fahaiza-manao tena azo antoka, azo antoka sy azo antoka ...